Mpanao hosodoko miezaka mampivoatra ireo kolotsaina avy any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy. Taorian’ny nandrombahany ny lokan’ny fifaninanana ho an’ireo zava-kanto maoderina « Paritana » tamin’ny taona 2016, anisan’ireo lokany ny fivahinianana famoronana tany Paris. Taorian’izay …Tohiny
Mpanakanto fantatra amin’ny vazo miteny. Taorian’ireo seho takariva samihafa teto an-tanindrazana sy ny famaranana ny taona tany Toamasina, dia hisantatra ny taona 2018 amin’ny fitetezana an’i Eorôpa sy Amerika avaratra i Samoëla. Haharitra telo volana …Tohiny
10 janoary, androm-pirenena ho an’ny fanadiovana omaly, izay fepetra noraisina taorian’ ireny valanaretina pesta izay niseho sy nitranga teto amin’ny firenena ireny, fepetra mendrika satria dia miantoka ny soa tokoa ny vokatra hotazana amin’ny fiaraha-mientana …Tohiny
Morondava : Sokatra miisa 500 tra-tehaka tany anaty sambo
Nahatrarana sokatra 500 isa indray tany Morondava ny talata 09 janoary lasa teo. Araka ny loharanom-baovao, dia nentina tao anaty sambo iray avy any Maintirano ireo harem-pirenena nokasaina entina tany Mahajanga ireo, izao tra-tehaka tao …Tohiny